दिनहुँ १०० नेपाली अन्धोपनको शिकार,आँखा कसरी स्वस्थ राख्ने ? – Kathmandutoday.com
दिनहुँ १०० नेपाली अन्धोपनको शिकार,आँखा कसरी स्वस्थ राख्ने ?
काठमाण्डु टुडे २०७० असोज २४ गते ३:४२ मा प्रकाशित
काठमाण्डु, २४ असोज– ‘सबैकालागि आँखा स्वास्थ्य : आजै आफ्नो आँखा जाँच गराऔं’ भन्ने नाराका साथ विहीबार विश्व दृष्टि दिवस विहीवार विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाईंदै छ । अन्धोपन र दृष्टिदोषका समस्याबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्यले सन् २००४ देखि प्रत्येक बर्ष अक्टुबर महिनाको दोस्रो विहीवार यो दिवस मनाउन थालिएको हो ।
नेपालमा चार लाख भन्दा बढी मानिसको एउटा आँखा दृष्टिविहीन छ । यस्तै दुईलाख वयस्क र ९० हजार बालबालिका न्युन दृष्टिको सममस्याले पीडित छन् । यसैगरी हरेक दिन नेपालमा एकसय भन्दा बढीले दृष्टि गुमाउने गरेको सरकारको तथ्यांक छ ।
मधुमेह, मोतिविन्दू र जलविन्दू अन्धोपनको प्रमुख कारण रहेको चिकीत्सकहरु बताउँछन् । त्यसैले बालकदेखि बृद्धिसम्म सबैले नियमित रुपमा आँखा जाँच गराउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । नेपालमा हाल डेढ दर्जन बढी अस्पतालमा आँखाको उपचार हुने गरेको छ । ग्रामिण क्षेत्रमा भने आँखाको सहज उपचार पहुँच पुग्न सकेको छैन । ग्रामिण क्षेत्रमा उपचार पहुँच पुर्याउन आँखा अस्पतालले स्थानीय सरोकारवालाको समन्वयमा पाँच दर्जन सामुदायीक आँखा उपचार केन्द्र सन्चालनमा ल्याएका छन् ।
सन् २०२० सम्ममा विश्वका सबैलाई सामान्य दृष्य क्षमतामा पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ ।
आँखा स्वस्थ राख्ने १० टिप्सहरु
हामी आफ्नो शरीर तन्दुरुस्त राख्नका लागि व्यायाम गर्ने, पौष्टिक आहार सेवन गर्ने, प्रशस्त मात्रामा पानी पिउने आदि गर्छौं । तर हाम्रो स्वास्थ्यको महत्त्वपूर्ण अंग आँखालाई कसरी स्वस्थ राख्न सकिन्छ भन्नेतर्फ भने ध्यान पुर्‍याउन सकेका हुँदैनौं । आँखा संवेदनशील र सजिलै संक्रमण हुने अंग हो । यसलाई धूलो, धूवाँ, भाइरस, ब्याक्टेरिया आदिले सजिलै क्षति पुर्‍याउन सक्छ । यसलाई जोगाएर स्वस्थ राख्न हामीले अनेकौं उपाय अपनाउन सक्छौं । यहाँ आँखा जोगाएर स्वस्थ राख्ने मुख्य १० वटा टिप्सहरु दिइएको छ ।
आँखा स्वच्छ र निरोगी राख्न चाहिने पोषण तत्त्वमा भिटामिन ‘ए’ महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । जुन तत्त्व गाजरबाट पाउन सकिने हुनाले यसको सेवन आँखाका लागि लाभदायक हुन्छ । भिटामिन ‘ए’ रेटिनाका लागि अति आवश्यक तत्त्व हो । यस्तै बन्दाकोपी, तोरीको साग, पालुङ्गो आदिमा पाइने लुटियन ((LUTION) तत्त्वले मस्कुलर डिजेनरेसन निको हुन्छ । आँखालाई ओमेगा-३ फ्याटी एसिडको पनि जरुरी पर्छ, जुन माछामा पाइन्छ । यसले आँखामा सुख्खापन हुनबाट बचाउँछ ।
कम्प्युटरमा लामो समयसम्म काम गर्दा यसको विद्युतीय प्रभाव र एकनासको हेराइले आँखामा दबाब पर्छ । जसले गर्दा आँखाको हेराइ कमजोर हुने, आफैं आँसु झर्ने, आँखा पोल्नेजस्ता समस्या देखा पर्छ । यसबाट बच्न छिन्-छिन्मा कम्प्युटरको स्क्रिनबाट बाहिर हेरेर आँखालाई आराम दिनुपर्छ, समय-समयमा आँखा झिमझिम गर्नुपर्छ । सुख्खा भएमा आँखामा कृत्रिम आँसु पनि लगाउन सकिन्छ । यसले आँखा रसिलो बनाइराख्ने हुनाले सजिलै आँखालाई यताउता घुमाएर हेर्न सकिन्छ ।
आँखाको रोग प्रायः वंशाणुगत हुन सक्छ । आफ्ना पूर्वजहरुलाई कुनै आँखाको रोग थियो कि भन्ने कुरा परिवारबाट थाहा पाइराख्नुपर्छ । यदि त्यस्तो रहेछ भने डाक्टरलाई जानकारी दिनुपर्छ । त्यस्तै आँखामा केही गडबड भएको महसुस भएमा आँखा बिग्रिन नपाईकन डाक्टरसँग कुरा गरिहाल्नुपर्छ । रोग लाग्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी हो । त्यसैले परिवारको सहयोगमा बेलैमा आँखा जँचाएर यसमा पुग्न जाने क्षतिलाई कम गर्नुपर्छ ।
हरियो तरकारी, माछा आदिबाट आँखालाई चाहिने तत्त्व प्राप्त गर्न सकिन्छ । साथै नियमित व्यायामले शारीरिक प्रणालीहरुको सञ्चालन सुचारु गराई आँखामा पर्ने चाप कम गर्न सकिन्छ । हरियो सागसब्जी तथा व्यायामले मधुमेहका रोगीहरुको आँखा र स्वास्थ्यमा पनि लाभ पुग्छ । समय-समयमा गरिने नियमित जाँचले शरीरमा लागेको रोग छिटो पत्ता लगाउन सकिन्छ । आँखामा केही असर भएको महसुस भएमा तुरुन्त डाक्टरबाट परामर्श लिई उपचारतर्फ लागिहाल्नुपर्छ । सम्पूर्ण शरीर स्वस्थ भएमा आँखा पनि स्वस्थ हुन्छ ।